Askari lagu dilay Magaalada Dhuusamareeb - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Askari lagu dilay Magaalada Dhuusamareeb
Askari lagu dilay Magaalada Dhuusamareeb
Wararka laga helayo Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi lagu dilay askari ka tirsanaa Ciidamada ka howlgalla Magaaladaas,sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah.
Dilka ayaa waxaa la sheegay in uu ka dambeeyey askari kale oo ka tirsan Ciidamada Dowladda,kaddib markii labada askari uu muran soo kala dhex-galay,isla markaana mid kamid ah askarta uu midkii kale dhowr xabadood ku dhuftay.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in askarigii dilka u geystay askariga kale ay gacanta ku dhigeen Ciidamada Amniga ku sugan Magaalada,isla markaana haatan uu ku xiran yahay Saldhiga Booliska Dhuusamareeb.
Laamaha Amniga Dhuusamareeb weli kama hadlin falka dilka Askariga ah ee Maanta ka dhacay Magaalada,waxaana dilkaasi uu kusoo aadayaa xilli amniga Magaalada siweyn loo adkeeyey lana filayo inay ka dhacaan doorashooyinka hoggaanka Galmudug.
Previous articleWasiirka Cadaaladda oo la kulmay Wafdi ka socda Hay’adaha USAID & PACT
Next articleSAWIRO:-Idaacadda Risaala oo deeq gaarsiisey Qoysas barakacayaal ah
Abiy Axmed oo u digay dadka horboodaya rabshadihii ka dhacay Itoobiya
Wufuud ku wajahan Dhuusamareeb & Amniga oo la adkeeyay
Dhageyso:-Warka Subax ee Radio Risaala 08-07-2020
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in Guul Caalami ah gaartay
Gabar Soomaali ah oo ‘xadgudub’ loogu gaystay Mareykanka
Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Dr Abiy Axmed oo hortagay baarlamaanka dalkaasi ayaa ka jawaabay su'aalo ay weydiiyeen mudanayaasha baarlamaanka. Dr Abiy mar uu ka jawaabayey...